Madaxweynaha Hirshabelle oo gogol dib u heshiisiineed ka daahfuray degmada Warsheekh | Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Hirshabelle oo gogol dib u heshiisiineed ka daahfuray degmada Warsheekh
Madaxweynaha Hirshabelle oo gogol dib u heshiisiineed ka daahfuray degmada Warsheekh
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay.
Madaxweyne Waare ayaa waxaa socdaalkiisa waxaa ku wehelinayay Wasiirka dib u heshiisiinta Dowlad goboleekda Hirshabelle,wasiir ku xigeeno,xildhibaano,Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe, Guddoomiyaha Degmada Balcad iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Maamulka Hirshabelle, waxaana Warsheekh kusoo dhaweeyay Maamulka Degmada, Xildhibaanada Golaha deegaanka iyo xubno kale.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyay degmada Warsheekh isagoo sidoo kale daahfuray gogol dib u heshiisiineed oo beelaha dega degmooyin ka mid ah gobolka Sh/dhexe lagu heshiisiinayo.
Booqashada Madaxweynaha Hirshabelle ayaa Degmada Warsheekh waxaa uu kula kulmay Maamulka Degmadaas iyo Xildhibaanada Golaha deegaanka, isagoo ka xog-wareystay xaaladda deegaanka iyo Arrimo kale.
Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha Hirshabelle ayaa kulankii uu la yeeshay xubnaha deegaanka degmada Warsheekh waxa uu kala hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen midnimada iyo ammaanka degmada ku taal xeebta Badweynta Hindiya.